reaches Archives - MM News TV
BEIJING: The number of casualties from China’s new coronavirus outbreak reached to 13,68 on Thursday after 253 new deaths were confirmed in the hard-hit Hubei province. In China, there are now more than 60,310 reported cases based on government estimates
Coronavirus death toll reaches 902 in China
BEIJING: The number of casualties from China’s new coronavirus outbreak reached to 902 on Monday after 99 new deaths were confirmed in the hard-hit Hubei province. In China, there are now more than 39,800 reported cases based on government estimates
Coronavirus death tally reaches to 803 in China
BEIJING: The number of casualties from China’s new coronavirus outbreak reached to 803 on Sunday after 81 new deaths were confirmed in the hard-hit Hubei province. It is assumed that the new virus appeared last year in a market selling
health and food February 7, 2020
Coronavirus death toll reaches to 638 in China
BEIJING: The percentage of people affected by coronavirus epidemic in China increased to approximately 638 on Wednesday, after Hong Kong recorded its first death from the disease and warnings for millions more to remain indoors in China. The reported number
health and food February 6, 2020
health and food February 4, 2020
Death toll due to Coronavirus reaches 425 in China
BEIJING: The epidemic Cornavirus has infected hundreds of people and so far the death row has reached 425 due to the virus in China. The Coronavirus outbreak, which originated in the Chinese city of Wuhan, is also spreading to other